भारतीय विदेश सचिवपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण : संयोग मात्रै कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ? - NepaliEkta
भारतीय विदेश सचिवपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण : संयोग मात्रै कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ?
25 November 20206December 2020 Nepaliekta	0 Comments
124 जनाले पढ्नु भयो ।
चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डा नखुलाइएको भएपनि परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले यसलाई नेपालमा बढिरहेको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनी भन्छन्, ‘उद्देश्य जे भएपनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको साङ्केतिक अर्थ बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही वर्षअघि चीनले नेपालको विषयमा भारत नै पहिलो हो जस्तो गर्ने गरिरहेको थियो। मलाई लाग्छ अहिले चीन त्यो धारणाको पक्षमा छैन। अहिले हामी पनि पछि छैनौँ है भन्ने सन्देश उसले दिइरहेको छ।’
उनले थपे, ‘नेपालका पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईबीच छलफल हुँदा कोइरालाले चिनियाँ पक्षलाई नेपाललाई अझ बढी सहयोग गर्न आग्रह गरेको एउटा प्रसङ्ग छ। त्यसमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले हामी भारतभन्दा अलिकति कमै सहयोग दिन चाहन्छौँ भनेका थिए। हामीले बढी सहयोग गर्‍यौँ भने तिमीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर चिनियाँ पक्षले भनेको हामीले पढेकै हौँ। सन् २०१५ सम्म पनि त्यस्तै अवस्था थियो। तर अब चीनले ‘हामी पछाडी छैनौँ’ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेको छ।’
ती दुई उपाध्यक्ष मुनि रहेका रक्षामन्त्री वेइ उपप्रधानमन्त्री हैसियतका अधिकारी रहेको बताइएको छ। उनको उक्त हैसियत अनुसारकै प्रोटोकल कायम गरी स्वागत र सुरक्षाको तयारी अघि बढाइएको सुरक्षा श्रोतले जानकारी दिएको छ।
उनले भने, ‘अहिले नै चीनबाट बढी प्रभावित हो कि भारतबाट प्रभावित हो भन्नलाई गाह्रो छ। तर नेपालमा अब पहिलेको जति भारतको प्रभाव छैन भन्न सकिन्छ।’
उनले थपे, ‘यदि नेपाल राजनीतिक रूपमा अस्थिर भइरह्यो र राज्य निर्माण, विकास र रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिइएन भने आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यहाँको घरेलु राजनीतिमा भारत र चीन दुवै सक्रिय हुने अपेक्षा हामी गर्न सक्छौँ।’
‘त्यसका स्पष्ट कारण छन्। आगामी १० देखि २० वर्षमा एशियामा सम्भवत चीनको प्रभुत्व कायम हुने देखिन्छ। सभ्यताको विरासतका साथै ठूलो जनसङ्ख्या र बढ्दो हिन्दू राष्ट्रवादी राजनीतिका कारण भारतले उक्त सम्भावनाबाट असहज महसुस गर्नेछ र अमेरिका सहितका साझेदारको सहयोगमा उसले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने प्रयास गर्नेछ।’
उनी थप्छन्, ‘सन्तुलन मिलाउन नसके भविष्यमा नेपाली भूमिलाई भारत र चीन दुवैले आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था एकातर्फ रहन्छ भने उनीहरूले यही भूमिबाटै एकअर्का विरूद्ध वैरभावपूर्ण खालका गतिविधि पनि गर्न सक्छन्।’
उनको भनाइ छ, ‘खासगरी भारत र चीनको सम्बन्ध मुख्य गरी रक्षा र सैनिक सम्बन्धमा तनावपूर्ण देखिएको बेला चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई बोलाउनुले नेपालीहरूले भारतको संवेदनशीलतालाई धेरै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन। हाम्रो सेनाध्यक्षको भ्रमण भएका कारण सन्तुलनका लागि पनि त्यसो गरिएको हुनसक्छ। तर मलाई यो केही अस्वाभाविक लागेको छ किनभने यो दुई वा तीन वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको दोस्रो भ्रमण हो।’
‘नेपाली सेना र पीएलएबीच केही सैन्य तालिमहरू भएपनि त्यसबाहेक उनीहरूबीच खासै ठूलो सहकार्य छैन। त्यही भएर यो भ्रमणको अर्थ र महत्त्व के हो त्यो प्रष्ट छैन।’
उनी भन्छन् ‘नेपालमा कसको भ्रमण हुन्छ कसको हुँदैन त्यो उहाँहरूको चासोको विषय होइन। हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटा प्रक्रिया अनुसार हाम्रा संवादहरू चलिरहेका हुन्छन्। जस्तो भारतबाट कसलाई बोलाउने अर्को कुनै देशलाई चासोको विषय हुँदैन। चीनबाट कसलाई बोलाउने त्यो अर्को कुनै देशलाई चासोको विषय हुनुहुँदैन। त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिलामा गलत ढङ्गले चासो देखाएको जस्तो हुन्छ।’
चिनियाँ रक्षामन्त्री राष्ट्रपति सीको भ्रमण यता नेपाल आउन लागेका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन्। (बीबीसी)
← अर्थमन्त्री पौडेल विरुद्ध बुटवलमा कालो झण्डा प्रदर्शन
मजदुर–कर्मचारी तथा विद्यार्थी विरोधी नीतिको विरोेधमा भारतमा देशव्यापी हडताल →
फिनल्यान्डमा १६ वर्षे किशोरीलाई प्रधानमन्त्री !
8 October 2020 Nepaliekta 0
कोरोनाको तेस्रो लहर विरुद्ध केजरीवालको तयारी
4 June 20214June 2021 Nepaliekta 0
नेपालले जारी गरेको नक्सा अमान्य : भारत
21 May 2020 Nepaliekta 0